I-Washpen Falls - I-Airbnb
Windwhistle, Canterbury, i-New Zealand
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Megan
Ihora elilodwa ukusuka e-Christchurch, le ndawo yokuhlala ebukekayo yenza kube lula ukubaleka.
Izingubo zokulala nelineni ezisezingeni eliphezulu ziqinisekisa ukulala okunethezekile kobusuku, phumula ekhishini lepulani elivulekile, indawo yokudlela, ukuhlala noma ukugoqa ngencwadi endlini yelanga ethokomele.
I-Chalet libalele futhi ifudumele inesici somlilo samatshe -
eziqukethwe ngokugcwele okuhlanganisa ubhavu oshisayo ojulile futhi kanokusho obekwe engadini - indawo ekahle yokuchitha amahora ngaphansi kwesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi.
I-chalet ibekwe epulazini elifanayo le-foot hills eliphinde liphathe i-Washpen Falls Adventure Walk edumile... i-chalet itholakala ekuqaleni / indawo yokupaka ye-Washpen Falls Adventure Walk. Lena ithrekhi ye-loop yamahora angu-2 enikeza indawo enhle. Uzodlula emahlathini aluhlaza uye endaweni egcina intaba-mlilo, uthole ukubukwa okukhangayo kuwo wonke amathafa aseCanterbury futhi ubone imifudlana efunzwa intwasahlobo kanye nezimpophoma ezimangalisayo.
I-Chalet itholakala ekuqaleni / ipaki yezimoto yomgwaqo we-Washpen Falls futhi eduze kwezindlu zangasese zokuhamba. Indlela yokuhamba ingase ibe matasa ngezinye izikhathi
okungukuthi izimpelasonto zamaholide omphakathi.
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-3, Omatolasi abangu-1
I-Chalet isendaweni enhle yokuhlola yonke isifunda sendawo okufanele sinikeze. I-Windwhistle iyisango eliya eLake Coleridge Back Country elinamachibi amaningi, izindlela zokuhamba, ukuzingela nokudoba, ukugibela amahhashi, ukushayela okunendawo enhle, ukuhamba ngeheliski, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukuhamba ngendiza emfuleni iRakaia noma ukudlala igalofu kwesinye sezifundo ezidumile.
Ama-Keen skiers azothanda iqiniso ukuthi uhamba nje imizuzu eyi-15 ukuya kumgwaqo wokufinyelela we-Mt Hutt Ski Field. Inqwaba yezinye izinkundla zokushushuluza nazo zikulesi sifunda okuhlanganisa iMt Olympus, Craigburn, Temple, Porter Heights, Mt Cheesman kanye neBroken River.
Sijabula kakhulu ukuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zakho nezidingo zakho ziyahlangatshezwa ngesikhathi sokuhlala kwakho